Monday February 13, 2017 - 14:57:21 in Somali News by Super Admin
Waagacusub.net - Waxaan halkaan Ku soo gudbinayaa arrin qatar ah oo ay sameeyeen Sirdoonka Ethiopia oo ah in ay heystaan isla markaana ay maamulaan Qaar ka mid ah kaamirooyin-ka (CCTV) ee ku xiran Xarunta (Villa Somalia) .
Kaamirooyinka waxeey kala socdaan:
1- La socodka Dadka u imaanaya Madaxweynaha.
2- La socodka Kulamada Madaxweynaha iyo Shirarkiisa
3- La socodka dhaqdhaqaaqa Madaxweynaha (markii uu baxayo iyo markii uu soo galayo) xarunta (Villa Somalia)
4- La socodka dhamaaan dhaq dhaqaaqa madaxweynaha iyo shaqaalaha Madaxtooyada.
Meelaha ay ku xiran yihiin Kaamirooyinka qaar.?
1- Parkinga baabuurta la dhigo ee xarunta Madaxtooyada.
2- Albaabka laga soo galo xarunta madaxtooyada iyo ka soo horjeedka Madaxtooyada gaar ahaan Hotel SYL,
3- Wadooyinka u dhaxeeyo qololka Madaxtooyadda.
4- Qaar ka mid ah xafiisyada Xogheynta madaxtooyada,
5- Hoolka shirarka Madaxtooyada.
1-Dhamaan kaamirooyinka Sirdoonka Ethiopia waxaa laga Xukuma xarunta Safaarada Ethiopia oo ku dhextaal Villa Somalia.
2- Si aan loo fahmin waxay sameeyeen sadaxdii kaamiro oo ku xiran hal meel, mid ka mid ah waxay si toos ah u aada Safaaradda.
3- kaamirooyinkaan waxaa lagu xiray xilligii uu Xasan Garguurte Madaxweynaha loo doortay.
1- Madaxweynaha iyo team-kiisa waa iney badalaan dhamaan kaamirooyinka ku xiran Xarunta Madaxtooyadda iyo meelaha ku dhow dhow Xarunta Villa Somalia, Madaama kaamirada ay u dhiganto Askari Qarsoon,
2- in lagu noqdo dhaamaan Network iyo habka ay ku shaqeyso dowlada gaar ahaan kuwa ku xiran Internet-ka network.
Haddii aan sidaas la yeelin waxeey ku guuleeysan karaan iney Madaxweyne Farmaajo si fudud ku dilaan iyagoo ku hogaamin kara cadawga ama dadka u shaqeeya.